D 99 डिजाईन: तपाईंको लोगो र वेब डिजाईन क्रउडसोर्सिंग
बुधबार, नोभेम्बर 25, 2009 सोमवार, जुलाई 8, 2013 Douglas Karr
मैले भर्खर आफ्नो अनुभवको बारेमा लेखें तपाईको डिजाइन क्राउडसोर्सिंग गर्दै। अनुभव सकरात्मक थियो र मैले छलफल गरे कुनै कल्पना छैन आन्दोलन र यसलाई मनपर्ने साइटहरूको विरोध। प्रायोजित पोष्ट मार्फत, यस हप्ता मैले प्रयास गरें 99designs.
D 99 डिजाईनमा भएको अनुभव एकदम मिल्दोजुल्दो छ र मलाई यो कुरा भन्न मन पर्दैन, दुबै साधारण छ र रमाईलो। मैलेaलाई तिर्न निर्णय गरें नयाँ ट्विटर पृष्ठभूमि त्यो राम्रो प्रचार गरियो मेरो कम्पनी, मेरो ब्लग र मेरा सेवाहरू। मैले शुल्कमा $ १०० + लगभग $ paid० तिरेको थियो ... न्यूनतम रd100 डिजाइन अन्तर्गत सिफारिश गरिएको रकम भन्दा कम।
यहाँ प्रविष्टि छ जुन मैले मेरो नयाँ ट्विटर पृष्ठभूमिको लागि विजेताको रूपमा चयन गरेको थिए।
लेखकले एक पृष्ठभूमि प्रयोग गर्‍यो जुन नि: शुल्क वालपेपर साइट मार्फत उपलब्ध थियो र त्यसपछि ती विवरणहरू स्थितिमा राखियो जुन मैले सोधेकोमा सोझै सोधें। मेरो दिशा निर्देशनहरूमा, म स्कोर गर्न र प्रत्येक डिजाइनमा र प्रत्येक डिजाइनरलाई प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया प्रदान गर्न सक्षम भयो। केहि डिजाइनरहरू वास्तवमै नजिक भएको थियो ... मलाई वास्तवमा थोरै खराब महसुस भयो बहुविध डिजाइनहरू खरीद नगर्दा!
D 99 डिजाइनका लागि प्रक्रियाले परम्परागत ग्राफिक डिजाइन उद्योगमा कमजोरी उजागर गर्दछ। D 99 डिजाईनका साथ, म विविध प्रकारका अविश्वसनीय उच्च गुणवत्ताका सबमिशनहरू प्राप्त गर्नमा सक्षम भएँ तर केहि थोरै भए बक्स बाहिर। यो थियो मेरो कलाकारको पहिलो परियोजनाd99 डिजाइनमा र उनीहरूले जिते! कलाकारले मेरो जानकारी लिए र पृष्ठभूमि उत्पन्न गरे जुन अरू कुनै पनि डिजाइन भन्दा फरक थियो। यो ताजा र स्वच्छ छ - तर अझै उच्च-टेक।
त्यहाँ ,51,000१,००० डिजाइनरहरू छन् जुनd99 डिजाईन समुदायमा साइटमा हरेक १० सेकेन्डमा नयाँ डिजाइन अपलोड गर्दछ। D 10 डिजाईन दिनको २ 99 घण्टा, हप्ताको days दिन र बर्षको हरेक दिन खुला हुन्छ। यो मान्छे को लागी एक सेवा मात्र होईन जो कि डिजाइन संसाधनहरु किन्न सक्दैन। D 24 डिजाईनहरूले डिजाइनका लागि गरेका छन् पास्टर रिक वारेन (लेखक प्रयोजन चालित जीवन) आफ्नो अर्को पुस्तक को कभर को लागी,
को SxSW आधिकारिक टी? शर्ट परियोजना र पनि डिश नेटवर्कको भ्यान रैप डिजाइन.
मलाई यी सेवाहरूबाट टाढा रहन गाह्रो हुन गइरहेको छ। म डिजाइनरहरूको साथ अविश्वसनीय रूपमा पिकर हुँ र म राम्रो साथीहरू हुँ (म अझै आशा गर्दछु ...) धेरैको साथ। म जहिले पनि उत्सुक छु र उनीहरूले के गर्न सकेकोमा छक्क परे। यो सरल छ कि यी सेवाहरूले मलाई विकल्पहरूको एरे प्रदान गर्छन् जुन म परम्परागत डिजाइन फर्महरू र अन्तर्क्रियाबाट प्राप्त गर्न सक्दिन।
एउटा कुरा जुन म चाहन्छु 99designs गरे आफ्ना कलाकारहरूलाई आफैँ र उनीहरूका फर्महरूलाईd99 डिजाइनमा प्रमोट गर्न अनुमति दिइरहेको थियो। मलाई थाहा छ कि म directly 99 डिज़ाइन फीसलाई बाइपास गर्ने अवसर पाउन सक्दछु यदि म सीधै कलाकारको साथ जान सक्छु - तर त्यो व्यावहारिक छैन प्रणाली को लाभ दिए। म अझै बाहिर throw 99 डिजाईनहरू प्रयोग गर्दछु जब म त्यहाँ बाहिर फ्याँक्न चाहन्छु र केहि रचनात्मक विचारहरू फिर्ता प्राप्त गर्न चाहन्छु ... तर कलाकार र उनीहरूको साइटहरूको प्रमोट गर्दा मलाई चलिरहेको सम्बन्ध सिर्जना गर्ने अनुमति दिनेछ जुन त्यो उत्तम विकल्प हो।
टैग: क्यानन लोगोठूलो फाईल ट्रान्सफरअजगररूबी
तपाईंको अनुभव डगलस साझा गर्न को लागी धन्यवाद!
डिसेम्बर १, २०१ 20 2009:२:2 अपराह्न
मैले यो पृष्ठभूमि मेरो लागि पनि प्रयोग गरें Tumblr पृष्ठ पनि। मँ लेआउट को सरलता र सुन्दरतालाई साँच्चिकै माया गर्दछु!